Musharaxiinta iyo siyaasiyiin Koonfur Galbeed oo ka walaacsan dib u dhaca magacaabista… – Hagaag.com
Musharaxiinta iyo siyaasiyiin Koonfur Galbeed oo ka walaacsan dib u dhaca magacaabista…
Musharaxiinta iyo qaar kamid ah xildhibaanada Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa walaac ka muujiyay dib u dhaca ku imanaya magacaabista Guddiga doorashada Madaxweynaha Maamul Goboleedka Koonfur galbeed Soomaaliya.
Kulan maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka qeybgalay Musharax Madaxweynaha Koonfur Galbeed Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo ah musharax u taagan qabasahda xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Kulankan ayaa waxaa sidoo kale ka qeybgalay qaar ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed iyo siyaasiyiin ka soo jeeda maamulkaas.
Hase yeeshee Musharax Muqtaar Roobow ayaa dhowaan wasaarada amniga dowlada federalka qoraal ka soo baxay lagu sheegay in uusan ka qeybgali karin doorashada Koonfur Galbeed,Hase yeeshee illaa hadda waxa uu ku adkeysanayaa Muqtaar Roobow oo xilal kala duwan ka soo qabtay Al-Shabaab inuu ka qeybgalayo doorashada.
Sidoo kale qaar kamid ah xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dib u dhinaca ku yimid magacaabista Guddiga doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ku dhaliilayaan Madaxda Koonfur galbeed oo ay sheegeen inuu ka meer meerayo magacaabida gudigaas.